सन्दीप लामिछानेको टिमसँग सिन्धुपाल्चोक यात्रा...
'सन्दीप लामिछाने टिम'सँग सिन्धुपाल्चोक यात्रा...
हामी सबैलाई थाहा छ । अहिले सिन्धुपाल्चोक पीडामा छ । सिन्धुपाल्चोकमा अहिले बाढी पहिरोले निकै विध्वंश मच्चाएको छ । मेलम्ची, हेलम्बु लगायत बिभिन्न ठाँउमा ठू्लो क्षती गरेको छ । धैरै मान्छे घरबारवीहिन हुन पुगेका छन् ।
त्यहाँका स्थानीयलाई सरकार तथा विभिन्न मनकारी व्यक्तिहरुले सहयोग पनि गर्दै आएका छन् ।
यस्तैमा सोमबार नेपालका स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पनि सिन्धुपाल्चोक पुगे । उनी आफू एक्लै कुनै कामले घुम्न भने गएका होइनन् । उनी अहिले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाज सेवामा पनि काम गर्ने उद्देश्यले ‘टिम सन्दीप लामिछाने’ संस्था पनि शुरु गरेका छन् । उक्त संस्थामा सन्दीपलाई विश्वास गर्नेहरुको आवद्धता रहेको छ र यो क्रमश बढ्दै गइरहेको पनि छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा बाढी आउँदा सन्दीप काठमाडौंमै थिए । भीसा लगाएतको समस्याका कारण इंग्ल्याण्डमा आयोजना हुने ‘द हन्ड्रेड’ क्रिकेट खेल्न जान पाएनन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय सन्दीपले दिनहुँजसो फेसबुक पेजमा आफ्ना कुराहरु राख्दै आइरहेका छन् ।
आइतबार उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू सिन्धुपाल्चोक जान लागेको जानकारी गराए । उक्त टिममा मलाई पनि आमन्त्रण गरिएकाले म पनि जान राजि भए । भक्तपुरबाट उक्त टिममा सामेल भइ सिन्धुपाल्चोक लागियो ।
विहान करिव ६ बजे नै सबै टोलीका सदस्यहरु भेला भई भक्तपुरको सल्लाघारीमा रहेको एक हार्डवेरमा गई त्यहाँबाट अस्थायी टहरानिर्माणका लागि सामानहरु किनियो ।
१० थान ४ इन्चको स्कवायर फलामको पाइप, ५० थान २ इन्चको स्कवायर पाइप, २ इन्च वाई १ इन्चको ५ थान गरी कुल ६५ थान फलामे पाइप र १२–१२ बन्डल९र ६ फिटका गरी कुल २४ बन्डल जस्तापाता एउटा ट्रकमा लोड गरीयो । सामाान लोड गरेको गाडी र हामीसहित गर्दा तीनवटा गाडीमा सल्लाघारीबाट चौतारा हामी विहान करीब ८ बजे प्रस्थान गरेका थियौं । चार जना चिकित्शकसहित कुल १३ जनाको टोली त्यस तर्फ प्रस्थान गरेको थियो ।
स्वास्थ टोलीको संयोजन नविन यादवले गरेका थिए । उनलाई साथ दिएका थिए डा. ज्योति यादव, डा. सन्जित लामा, डा.कुशुम श्रेष्ठले ।
३ घण्टाको यात्रापछि करिव ११ बजेतिर हामी चौतारा पुगेका थियाैं । त्यहाँँ रहेको सैनिक ब्यारेकमा ती सामान हस्तान्तरणको कार्यक्रम थियो । हामीले बाटोबाटै सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेललाई फोन गरिसकेका थियौं । हामी पुग्नु अगावै उनी कार्यक्रम स्थलमा पुगिसकेका थिए ।
कुनै विलम्ब नगरि कार्यक्रम प्रजिअले नै शुरु गरे । हामीलाई पनि हतार नै थियो र छिटो छिटो कार्यक्रम सम्पन्न गरि त्यहाँबाट मेलम्ची गयौं । मेलम्चीमा सन्दीप टिमले आयोजना गरेको स्वास्थ्य शिविर गर्नु थियो ।
त्यसैले सैनिक ब्यारेकको कार्यक्रम चाँडै सकेर त्यता जानु अघि आयोजित कार्यक्रममा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानले आगामी दिनमा पनि नेपालीलाई दुःख पर्दा सहयोग गर्न सधैं तप्तपर रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
आफु द हन्ड्रेड खेल्न बेलायत जाने समय आइसकेकोले आगामी दिनमा कुनै सहयोग आवश्यक परेमा सन्दीप टिमका सदस्य नविन यादवसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।
प्रजिअ पोखरेलले पनि अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिबाट सहयोग आएपछि खेलकुदको क्षेत्रका व्यक्तिबाट सहयोग पहिलो पटक आएको र यसबाट आफू उत्साहित भएको पनि बताए । साथै सन्दीप र टिमलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
प्रजिअका अनुसार यो राहत सामाग्री गत वर्ष लिधि पहिरोले विस्थापितलाई अस्थायी टहरा बनाउन प्रयोग हुने र त्यही पठाउने भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै भने ।
त्यस्तै नविन यादवले पनि सन्दिप बेलायतमा भएमा पनि आफुहरु र टिम सन्दिप लामिछानेका अन्य सदस्य सहयोगका लागि सधै तयार रहेको बताएका थिए ।
त्यसपछि सांकेतिक रुपमा सन्दीपले प्रजिअलाई सामानको लिस्ट हस्तान्तरण गरे । त्यसपछि हामीले सो सामाग्री प्रजिअलाई दियौं र सो गाडी त्यहाँबाट लिधि लाग्यो । त्यहाँ केही खेलकुदपे्रमीले सन्दिपसँग फोटो खिचे र हामी मेलम्ची लाग्यौं ।
करिव १ बजे त्यहाँबाट मेलम्चीको लागि निस्कियौं । टोलीका सदस्यहरुले विहान ब्रेक फास्टमात्र खाएकाले बाटोमै खाना खाने निर्णय गरियो र फोनबाटै होटलमा अर्डर गरियो । सिम्लेमा गएर खाना खायौं । त्यसपछि २ बजे हामी त्यहाँबाट निस्कियौं । १२ किलोमिटरको यात्रा गरेपछि पाँचखाल नपुग्दै जिरो किलोबाट दाँया लाग्यौं । बाटो निकै राम्रो थियो ।
प्रजिअले हामीलाई स्वास्थ शिविरका लागि मेलम्ची नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतसँग समन्वय गर्न भनेकाले फोन गर्‍यौं र उनले तीन बजे पुग्नु हुन्छ भने ।
हामी कुन्ताबेसी, सिपाघाट हुँदै तीन नबज्दै मेलम्ची पुग्यौं । बाटोबाटै हामीले इन्द्रवतिको विनाश हेर्दै गएका थियौं जसले गर्दा हाम्रो गाडीमा यात्रा गर्ने हरकेका आँखा रसाएका थिए ।
त्यहाँ पुग्दा प्रकृति कति निर्दयी बनेको छ भन्ने महशुस भयो । केही घरहरुको अवशेष नै छैन, केही अग्ला घरका दुई तलासम्म बालुवा लगायत लेदोले भरिएका थिए । त्यसपछि हामी इन्द्रेश्वरी माध्यामिक विद्यालय गयौं । यो नै हाम्रो शिविरस्थल थियो । मानिसहरु जम्मा भईसकेका रहेछन् । हतार हतार हामीले शिविर सुरु गर्‍यौं ।
शिविरमा बिभिन्न उमेर समूहका स्थानीयहरुको स्वास्थ्य जाँच गरियो । साँझ साढे ६ बजेसम्म करीब साढे तीन घण्टामा ५८ जनाको स्वास्थ्य जाँँच गरियो । उनीहरुमा विपद्मा परेपछि डिप्रेसनको समस्या देखिएकाले उनीहरुलाई मनोपरामर्सको आवश्यकता देखिएको छ । स्वास्थ्य शिविरमा आएकाहरुलाई औषधी, मास्क, स्यानिटाइजर र स्यानेटरी प्याड वितरण गरिएको थियो ।
आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम अनेत्र पनि गर्ने योजना सन्दीपले बनाएका छन् । स्वास्थ्य शिविर पछि हामी करीब सात बजे त्यहाँबाट काठमाडौंका लागि प्रस्थान गरेका थियौं । करिब तीन घण्टाको यात्रा पश्चात हामी काठमाडौं आइपुगेका थियौं । डेढ घण्टाको बाटोलाई छिचोल्न रातिको समय र निर्माण समग्री बोकेका ट्रिपरहरुका कारण पनि झण्डै दोब्बर समय लगाउन बाध्य भयाैं।
सन्दीप लामिछाने टिमले गरेको यो सहयोगले पक्कै पनि गत बर्ष लिदी पहिरोबाट प्रभावितहरुको घाउमा मल्हम लगाउने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।